Cilmi-baadhis: Daacadnimadu Waxa ay ka Dhigaysaa Mid Faraxsan oo Caafimaadkiisu Fiican Yahay | Maankaab.com
Cilmi-baadhis: Daacadnimadu Waxa ay ka Dhigaysaa Mid Faraxsan oo Caafimaadkiisu Fiican Yahay
Been sheegistu waxa ay u xun tahay caafimaadkaaga, haddii aad daacad noqotana waxa aad noqonaysa mid caafimaad qaba oo had iyo goor faraxsan sida lagu ogaaday daraasad cusub oo hadda soo baxday.
Dadku inta badan waxa ay u sheegaan been kaftaneed (White lies) dadka ay aadka u daneeyaan si ay uga fogadaan in ay dareenkooda amma qalbiyadooda dhawacaan sida lagu ogaaday daraasado badan oo la sameeyey, balse natiijada daraasadahan waxa ay muujiyeen in been sheegistu ay inta badan dhaawac u geysato qofka sheega jidh ahaan iyo maskax ahaanba.
Cilmi-baadhis ay sameeyeen khubaro ka tirssan Jaamacad la yidhaa University of San Diego, gaar ahaan waaxda shay-baadhka maskaxda, ayaa iftiimisay in daacadnimadu qofka u horseedo farxad. Khubaradan waxa ay daraasadooda ku eegaayeen sida beenta fudud u saamayso hab-nololkeedka qofka.
Daraasadoodii ugu horraysay waxa ay ku baadheen heerka uu taagnaa xidhiidhka jacayl eek a dhaxeeya labada qof marka dadku sheegayaan been kaftameedka (white lies). Waxa ay ogaadeen in jacaylka dadku xoogayso amma kordho marka qofku qofka kale dhaawaca ka ilaaliyo, balse cilmi-baadhis labaad oo ay sameeyeen waxa ay ku ogaadeen in been sheegista iyo daacad darradu dhaawac u keento qofka sheega amma aan daacada ahayn, halka ka daacada ahna caaifmaadkiisu wanaagsanaado mar walba.
Cilmi-baadhis kale oo ay samaysay Jaamacad la yidhaa University of Notre Damae oo la daabacay 2012, ayaa xustay in been sheegistu dhaawac xun u geysato qofka maskaxdiisa, halka dadka daacada ay maskax ahaan iyo caafimaad ahaanba noqdaan kuwo degen.
Khubaradan waxa ay baadhitaan u sameeyeen 110 qof, muddo toban toddobaad ah, waxaanay dadka la baadhay da’doodu u dhaxaysay 18 jir ilaa 71 jir. Kala badh dadkaas waxa loo sheegay in aanay muddada 10 toddobaad ah been sheegin, halka kuwa kalena aan wax ogaysiis ah la siinin amma aan laga xakamayn hab nololeedkooda, waxaana soo baxday in dadka aan beenta sheegin ay jidh ahaan iyo caafimaad ahaanba noqdaan kuwo caafimaad qaba, marka loo eego kuwa aan la xakamayn ee noloshooda caadiga ah iska watay.